Taliyihii qaybta bileyska ee gobolka Karkaar oo xilkii laga qaaday, taliye cusubna loo magacaabay. – Radio Daljir
Taliyihii qaybta bileyska ee gobolka Karkaar oo xilkii laga qaaday, taliye cusubna loo magacaabay.
Qardho, May 07 – Cali Axmed Cali taliyihii qaybta booliska ee gobolka Kar-kaar ayaa xilkii laga qaaday, waxaana loo magacaabay C/qaadir Axmed Khayr oo ahaa jiray taliyaha laanta ilaalinta canshuuraha ee gobolka Bari ayna walaala yihiin wasiirka Amniga ee Puntland.
Taliyihii hore ee xilka laga qaaday oo maanta waraysi siiyey idaacadda Daljir ayaa sheegay inuu diyaar u yahay wareejinta xilkaasi, uuna soo dhawaynayo taliyaha cusub ee qayba bileyska gobolka Karkaar ee xaruntiisu tahay magaalada Qardho.
Isagoo ka hadlayey wax qabadka muddadii halka sano ahayd ee uu xilka hayey ayuu sheegay inuu qabtay wax badan oo la xiriira dhinaca amniga, sida dambiilayaal ay qabteen, daroogo ay gubeen iyo amniga guud oo ay wax fiican ka qabteen.
Mas?uuliyiinta gobolkaasi ayaa dhawaanahamba isku dayayey inay soo qabtaan gacan ku dhiiglayaal dil ka geystay meel u dhaw degmada Dhahar ee gobolka Sanaag, balse wali lagu guuleysan hawshaasi.
Xasan Cabdi Farey